Dilaagii Malmö oo xabsi daa’in lagu xukumay | Somaliska
Ninka lagu magacaabo Peter Mangs oo sanadkii 2009-2010 ugaarsi ku dilay dhowr qof oo soo galooti ah ayaa maxkamad ku taala gobolka Skåne waxay ku xukuntay xabsi daa’in iyo in uu bixiyo lacag gaaraysa hal milyan iyo 100.000kr oo la siinayo dadkii uu wax gaarsiiyay.
Maxkamada ayaa go’aanka u cuskatay in ninkaan uu si kas ah u dilay 2 qof, 5 goor in uu isku dayay dil iyo sadex goor oo uu hanjabaad sharci daro ah uu sameeyay. Maxkamada ayaa sheegtay in dambiyada uu galay ninkaan ay yihiin kuwo qatar ah isla markaana uusan qiimeyn nolosha dadka.
Mangs ayaa qareenkiisu horay ugu dooday in madaxa looga jiro balse maxkamada ayaa diiday arintaan. Waxay maxkamadu sheegtay in ninkaan uu caafimaad qabay markii uu dadka ugaarsanayay. Dambiyadiisa ayaa lagu micneeyay naceyb uu u qabo dadka ajaanibta ah.
Ninkaan ayaa la soo xiray bishii November ee sanadkii 2010 isagoo dilay 2 nin oo soo galooti ah iyo gabar Swedish ah oo nin soo galooti ah baabuur la saarnayd. Mudadii uu ninkaan ugaarsanayay soo galootiga ayuu cabsi weyn ku abuuray Soomaalida iyo dadka soo galootiga ah ee ku nool magaalada Malmö.
Xisbiga Moderaterna oo hogaamiye cusub magacaabay
Yaa ku leh: Taajir xanaaqay ama Reer Soomaaliyeed oo ay ku kacday [video]
November 23, 2012 at 13:20
mansha allah mar hadii kaa la xukumay inta kale ee magan sida uu sameyey yaa ku quus qadanaya
asc dhamaan inta wax garata . waa arin macquul ah ninkii wax dila waa jibkiisa ha la mariyo jimcaale sxb soomaliya ayaa sidaan ookale ku fiican in loo xukumo waxaasaa kaa sharci ah mahad sanid casidu waa muhiim sharcigine waa sheey qaali ah
Waan ka xumahay maskiinka in la xukumo oo xabsi daa’in lagu xukumo mida kale ani hada waxaanba rabay inaan 2 carab ama hal aan ka taqaluso oo 8 sano xabsi soo liqo lkn hadeeba sheekada marooso xabsi daa’in lugaha len ka jibinaa dhaawac ka dhigaa insha allah asc
November 24, 2012 at 15:34
KKK war moge sxb gaalo sharcigood la iskumahaleyo wa lahiifiyana banan cidna ha isku qudhgoyn becose qof 100 dily ad arkaysa 10 sano lagu xukmo iyo ku hal qof dilay xabsidaaim soo cid ha iskudilin